MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » U Tha Aung Nyun presented his Credentials to Her Excellency The Right Honourable Dame Patsy Reddy GNZM, QSO, Governor-General and Commander-in-Chief in and over the Realm of New Zealand
U Tha Aung Nyun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to New Zealand, presented his Credentials to Her Excellency The Right Honourable Dame Patsy Reddy GNZM, QSO, Governor-General and Commander-in-Chief in and over the Realm of New Zealand on 28 June 2017, in Wellington.
Dated. 1 July 2017
နယူးဇီလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဝယ်လင်တန်မြို့၌ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဘုရင်ခံချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒိမ် ပက်စီ ရက်ဒီ ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်